तिथि मेरो पत्रु » ट्विटर प्रेम बारे मा के तपाईं के सिक्न सक्छौं??
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 17 2021 |2मिनेट पढ्न
यी दिन, सामाजिक सञ्जाल साइटहरू, उनि मुक्त हुँदा मानिसहरू आफ्नो अधिकांश समय खर्च जहाँ शायद ठाउँ हुन्.
यो सत्य हो कि, जबकि अक्सर सामाजिक मिडिया बिताएको समय सबै निराधार chitchats गप्पें हाक संग बेकारी हुन बाहिर जान्छ, कहिलेकाहीं मानिसहरूले यी वेबसाइटहरु देखि रोमाञ्चक र महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै सिक्ने अन्त. उदाहरणका लागि, नयाँ र नवीन विधि प्रस्ताव सामाजिक सञ्जाल पृष्ठ छन्, नवीनतम फैशन लहड मानिसहरूलाई शिक्षित कि पृष्ठ, र यति मा.
त्यसपछि, एक सामाजिक नेटवर्क को एक नियमित प्रयोगकर्ता भएर एक बस सिक्न सक्छौं केही पाठ छन्; तल माइक्रो-ब्लगिंग साइट ट्विटर सिकाउँछ केही प्रेम पाठ हो.
1. प्रेम सँगै बस्नुको मा होइन:
यो एउटा पाठ Miley साइरस फेब्रुअरी मा प्रेमी जस्टिन Gaston उनको टुक्रिन समयमा ट्विटर मार्फत हामीलाई दिनुभएको छ, 2011. टुक्रिन घोषणा माइक्रो-ब्लगिंग साइट मा, कोरेसले साँचो प्रेम समाप्त हुन्छ कहिल्यै साँचो प्रेम सुखी अन्त हुन सक्दैन भन्नुभयो.
टेलिभिजन श्रृंखला Hanna Montana को पूर्व तारा दे जाने प्रेम व्यक्त अर्को तरिका हो भनेर जोडी. यो सबै को लागि एक ठूलो प्रेम पाठ हो, युवा वा वृद्ध.
तपाईं कसैलाई प्रेम भने, तपाईं उसलाई / उनलाई जान कसरी थाहा हुनुपर्छ. एक व्यक्ति जारी गर्न चाहँदैन भने तपाईं प्रेम वा तपाईंसित हुन, तपाईं उहाँलाई / उनको जोडदार त्यसो गर्न चाहनुहुन्छ कहिल्यै गर्नुपर्छ; तपाईं कि व्यक्ति प्रेम किनकी यदि यो छ, तपाईं पक्कै / उनको खुसी उहाँलाई हेर्न चाहन्छन् हुनेछ.
2. आफ्नो साथी संग समय खर्च गर्दा तपाईं उल्लेख हुँदैन केही कुराहरू छन्:
हाल मानिसहरू एक तिथि मा भने हुँदैन भनी कुराहरू ज्ञान भेला मदत Twitter मा Trending एक हैश ट्याग थियो. हैश ट्याग यस जस्तै जान्छ: #FiveWordsToRuinADate.
प्रयोगकर्ता एक मिति बिगार्न सक्छ कि शब्दहरूलाई सुझाव को एक नम्बर पोस्ट. ती सुझाव केही सम्झना साँच्चै लायक थिए.
उदाहरणका लागि, मत्ती Lieberman, AfterBuzz टिभी लागि एक पाहुना हुनुहुन्छ, एक मिति बिगार्न सक्छ भनी अनुसार पाँच शब्द हो भनेर लेखे “तपाईं मेरो काकाको जस्तै चुम्बन”. के Lieberman भन्न चाहन्थे यो थियो आफ्नो पाएको प्रेम को सामने आफ्नो विगत सम्बन्ध बारेमा कुरा गर्न एक ठूलो गल्ती हो.
अर्को उदाहरण गरेर कलरव छ जेफ ड्रेक, एक लेखक. पाँच निषेधित शब्दहरू, उहाँलाई अनुसार, हो “मेरी आमा हामीलाई ड्राइव गर्न सक्छन्”. आफ्नो साथी संग समय खर्च गर्दा बोलेका भने यो कथन एक ठूलो spoilsport हुन सक्छ, तपाईं एक मान्छे हो विशेष भने.
हो, तपाईं पक्कै आफ्नो आमा प्रेम सही छ, तर सबै भन्दा केटीहरुले जीवनमा मानिस आफ्नो आमा को सन्दर्भ ल्याउन वा उनको बारेमा धेरै कुरा हेर्न घृणा.
ट्वीटर खोज पट्टी मा हैश ट्याग #FiveWordsToRuinADate दर्ज; तपाईं धेरै यस्ता रोचक र उपयोगी सुझाव देख्न मिल्नेछ.
3. साना कुराहरू चमत्कार गर्न सक्छ:
प्रेम साना कुराहरूको बारेमा छ; ट्विटर मा कम से कम छलफल मा त सुझाव. उदाहरणका लागि, एक कलरव Patama पोस्ट बालिका पछि देखि अङ्कमाल को अनुभव प्रेम भन्ने बुझाउँछ द्वारा.
आफ्नो साथी बनाउन सक्छ यी साना कुराहरू प्रेम र ट्विटर तिनीहरूलाई धेरै सिकाउँछ.
शीर्ष5प्रेमी लागि चिकी Flick सिनेमा